Sawirro: Madaxweynaha Galmudug Oo Caabudwaaq U Tagay Arrimo La Xiriira Dib U Heshiisiin Iyo Amniga – Goobjoog News
Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle (Xaaf) oo safarkii uu ku wehliyay ku xigeenkiisa Maxamed Xaashi Cabdi iyo mas’uuliin ka tirsan laba gole ee maamulka ayaa maanta gaaray degmada Caabudwaaq ee waqooyiga Gobolka Galagduud.
Ujeedka socdaal madaxweya Galmudug uu ku tegay Caabudwaaq ayaa ah xoojinta maamulka degmada iyo dib u heshiisiinta beelaha ku dhaqan magaaladaas oo xiliyada qaar maleeshiyaad kasoo kala jeeda uu isku dhac dhexmaro.
Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa afaafka hore ee Caabdudwaaq waxaa kusoo dhaweeyay maamulka degmada wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan galmudug oo horay u joogay Caabdudwaaq iyo qeybaha kale ee bulshada.
Mahad Cumar cilmi oo ah gudoomiyaha maamulka degmada Caabdudwaaq ee Maamulka Galmudug ayaa hadalo isugu jira soo dhaweyn iyo sida ay ugu baahayihiin inay magaaladu amni noqo u jeediyay madaxweynaha iyo wafdigiis,waxana uu sheegay inay ka maamul ahaan ay ka shaqeynanaan nabad gelyada Caabdudwaaq.
Ugaaska Waqooyiga Beelaha Gobolka Galgaduud Axmed Bare Taakow iyo qaar ka mida bulshada rayidka ayaa goobta ka sheegay in xiligaan ay Caabudwaaq u baahantay ciidamo amnigeeda suga si looga gubdo dhacdooyinka amni daro oo xiliyada qaar ka dhaca.
Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa sheegay in maamulkiisu uu ka shaqeydoono amniga dhamaana tegi doono deegaanada galmuudg oo ay qaarkood xiliyada qaar ka dhacaan dagaal beeleedyado iyo magaalada dhusamareeb oo hada xarun u ah maamulka ahlu sunna si loo dar dar geliyo dib u heshiisiinta Galmudug iyo Ahlu sunna.
Safarkii ugu horeeyay ee deegaano ka tirsag Galmudug uu madaxweyna xaaf ku tago waxaa uu maanta ku gaaray Degmada Caabudwaaq waxana lagu wadaa in uu la kulmo la qaato odoyaasha dhaqanka iyo maamulka degmada.